भुत्ते राष्ट्रवादले जन्माएको लुते तानाशाह – Sudarshan Khabar
भुत्ते राष्ट्रवादले जन्माएको लुते तानाशाह
स्वागत नेपाल । संसारभरि जहिले पनि जहाँ पनि भुत्ते राष्ट्रवादले कि लुते तानाशाह जन्माउँछ कि जनतामा निरासा र वितृष्णा जन्माउँछ ।
त्यो तानाशाह लुते भएको कारणले पराजित हुन्छ किनकि जन्म नै भुत्ते राष्ट्रवादबाट भएको हुन्छ ।
भुत्ते नभएर सच्चा र राष्ट्रवादले फेरि शक्तिशाली तानाशाहको उदय हुन्छ, त्यो जनताको तहबाटै आएको हुन्छ ।
त्यसैले भुत्ते राष्ट्रवादबाट जन्मिएको लुते तानाशाहबाट जन आकांक्षा पूरा हुन नसकेपछि जन्मिएको निरासा र वितृष्णाका कारण फेरि कि भीडतन्त्र जन्मिन्छ कि स्पष्ट विचार सहितको वौद्धिक विद्रोह जन्मिन्छ ।
भीडतन्त्रले अमुक अमुक हिरोइजम स्थापित गर्छ । र, समस्याको दीर्घकालीन विचार सहितको होइन कि सरकारले केही गर्न नसकेकोले जनतामा उब्जिएको रीस फेर्न तात्कालीक समाधान खोज्छ ।
अनि केही समयपछि विलाएर जान्छ केही एजेण्डाहरुसँगै । सँगै जन्मिएको वौद्धिक र संगठित विद्रोहले सुसुप्त रुपमा बन्दै नयाँ विचार सहितको समाधान लिएर आउँछ ।
तर त्यो वौद्धिक विद्रोह सुस्तरी हुने भएकोले त्यसपूर्व केही समय भीडले गलत कुराहरुलाई पनि सत्य भनेर स्थपित गर्न प्रयास गर्छ । अदालत पनि त्यसैको छायाँमा पर्छ ।
सरकारबाट विश्वास र सुरक्षा नपाएपछि पत्रकारले प्रहरीको काम गर्न थाल्छ अनि प्रहरीले सिनेमाको हिरोजस्तो बनेर फेक इन्काउन्टरहरु पनि गर्न थाल्छ ।
पक्राउ गर्न नपर्नेलाई पक्राउ गर्छ, पक्राउ गर्नै पर्नेलाई पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै इन्काउन्टर गरिदिन्छ ।
स्यावासी पनि पाउँछ र प्रोमोसन पनि हुन्छ । त्यो कानुन हातमा लिने भीड, प्रहरी बन्ने पत्रकार, छोरीका लागि दूध बोकेर विहान पसलबाट फर्कँदै गरेको गुण्डागर्दी नै गर्ने किन नहोस् हप्ता असुली गर्ने गुण्डालाई मारि नै दिने गैरन्यायिक कानुनी सफाया सबैथोक भए पनि कोही केही बोल्दैन ।
समाजले विचारकले लेखकले सामाजिक अभियन्ताले केही भन्दैन किनकि राज्यको अकर्मण्यताबाट सबै आजित भएका हुन्छन् ।
प्रहरीको फेक इन्काउन्टरदेखि प्रहरी बनेका पत्रकार, पत्रकार बनेका हरेक मोबाइधारी व्यक्ति सबै आआफ्नै सुरमा आफूलाई शूरा ठान्छन् ।
यो सबैको वीचमा आफूलाई शक्तिशाली देखाउन शासकले पनि आदेश निर्देशको भरमा शासन चलाउन खोज्छन् ।
अदेशको भरमा शासन चलाउने र हुकुमीतन्त्र अर्थात् अध्यादेशराज अर्को शब्दमा डिक्रीक्रेसीले मुलुक चलाउन खोज्ने भ्रममा आफैँ जाकिन पुग्छन् ।
नेपालमा अहिले ठ्याक्कै यस्तै छ । डिक्रीकेसी शुरु गर्न खोजेर ओलीको लुते तानाशाहीपन अन्त्य हुन लागेको छ ।
इतिहासमा के पी ओली सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भन्ने भ्रम पालिरहे । बरु इतिहासमा एकपटक मात्रै यस्तो समय आयो जहाँ एउटै व्यक्ति एकै पटक सरकार प्रमुख पनि राष्ट्र प्रमुख पनि बनेका थिए ।
उनी थिए गिरिजा प्रसाद कोइराला । जो राजा हटाइसकेपछि राष्ट्रपति पनि निश्चित नभइसकेको अवस्थामा आफैं प्रधानमन्त्री र राष्ट्र प्रमुख बनेका थिए ।
कोइराला भन्दा पनि ओलीले आफूलाई शक्तिशाली ठान्न थालिसकेका थिए सबैले दुई तिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भन्दा भन्दै ।
उनले निर्णयहरु पनि त्यस्तै गरिरहेका पनि छन् । एक दशक अगाडि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु छ भने जनतालाई राइट टु रिजेक्टको अधिकार दिनुपर्छ भनेर माग गरेर म समेतले दायर गरेको रीटमा त्यस्तो कानुन बनाउनु भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएकोमा पनि अटेर गरेर त्यो कानुन चाहिँ नबनाएर अझ लोकतन्त्र लाई कमजोर बनाउने अध्यादेश चाहिँ ल्याएर व्यवस्था होइन सरकार चाहि बलियो बनाउ लागे पछि प्रधानमन्त्री चाहिँ बलियो कसरी हुन्छ ?
अतिशक्तिशाली मानिएका, आफैँले आफैँलाई ठानेका प्रधानमन्त्री के पी ओली इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर र निरिह प्रधामन्त्री देखिएका छन् ।
यस्तो किन हुन्छ ? विश्वमा यस सम्बन्धि विश्लेषणहरु कसरी गरिन्छन् ? वास्तवमा नेता वा शासक भनाँै शक्तिशाली र बलियो हुन्छ कसरी ? हेरौँ विश्वका केही विश्लेषण र अभ्यासहरु सन् १९६५ अगस्त १३ को दिन थियो ।
इण्डियन प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्रीसँग तीन जना सैनिक अधिकारीहरु आएर सुनाए – १०० ट्याङ्क सहित पाकिस्तानी सेनाको समूह जम्बुको चाम्ब क्षेत्रस्थित अन्तराष्ट्रिय सीमा क्रस गरिसकेको छ ।
लाल बहादुर शास्त्रीले तत्कालै लाहोरको समाविष्ट क्षेत्रबाटै नयाँ सैन्य फ्रन्ट खोल्न आदेश दिइहाले र एउटा ऐतिहासिक बैठक बोलाए ।
त्यो ऐतिहासिक बैठक ५ मिनेटभन्दा कम समयमा सकिएको थियो, हाम्रा ऐतिहासिक बैठक शुरु नभइकन सूचना टाँस गरेर सरेजस्तो वा सभामुखले बोल्न शुरु गर्ने गरेको पाँच मिनेट नभई सकिएजस्तो ।
इण्डियाका सबैभन्दा प्रभावशाली र सफल अनि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री को हुन् अनि सबैभन्दा कमजोरचाहिँ को ? यो प्रश्नमा विश्लेषकहरु वीच इण्डियन अनलाईन आदिमा छलफल चलिरहन्छन् ।
धेरैले इण्डियाका हालसम्मका सबैभन्दा प्रभावशाली र दह्रा प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री नै हुन् भनेर त्यही बैठक र निर्णयलाई आफ्नो आधार बनाएका छन् ।
विश्लेषक, विचारदाता र पेशेवर टिप्पणीकर्ताहरुले पनि लालबहादुर शास्त्रीलाई ए प्राइम मिनिस्टर विथ नो मनी अर्थात् पैसा बिनाका प्रधानमन्त्री भनेका छन् ।
उनीहरुले त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले अन्तराष्ट्रिय प्रतिक्रियाहरुलाई पनि नपर्खिकन निर्याय गरेका कुराहरुलाई यतिबेला झल्झली सम्झिएको उल्लेख गरेका छन् ।
शास्त्रीको निर्णयको तुरुन्तै सञ्चारमाध्यममा लाहोर क्षेत्रमा भारतीय सैनिक छ्याप्छप्ती भन्ने समाचार फैलिसकेको थियो ।
त्यसको दशौँ दिनमा शास्त्रीले स्वतन्त्रता दिवसको दिवसको समारोहको रातो मञ्चमा उभिएर‘हथियारों को जवाव हथियारों से देंगे’ र ‘ हमारा देश रहेगा तो हमारा तिरंगा रहेगा’ भनेका थिए ।
उनले ती दुवै वाक्यलाई अन्तराष्ट्रिय जगतलाई स्पष्ट पार्न इङ्गलिसमा समेत भनेका थिए ‘फोर्स विल बि मिट विथ फोर्स’,‘आवर फ्ल्याग विल सर्भाइभ अन्ली इफ कन्ट्री डज’ भनेका थिए ।
यो सन्दर्भ भाषाभन्दा त्यसको प्रयोगको अर्थ कति आवश्यक भन्ने थियो । कतिले सकि सनकी विदेशी भाषा प्रयोग गर्नुमा विरोध गरेका बेला उनले त्यसको औचित्य राम्रोसँ पुष्टि गरेका थिए ।
त्यसो त ईण्डियनहरुले अंग्रेजलाई विरोध गरेको बुझाउन पनि शुरुमै अंग्रेजीमा पत्रिका निकाल्नु परेको र पाकिस्तानीहरुले पनि द डन पत्रिका शुरुमै विदेशीलाई आफ्ना कुरा सम्झाउन अंग्रेजीमै अभ्यास गर्नु परेको इतिहास भएका कारण उनीहरु भाषा भन्दा भावलाई बढी ध्यान दिन्छन् भन्ने मानिन्छ । त्यसैले त्यहाँ नजानेर भन्दा जानेर गल्तीका अभ्यासहरु बढी हुने गरेका छन् ।
तर, बर्तमान सन्दर्भमा फेरि जाऔँ , शास्त्री त्यति नै कारणले हालसम्म सबैभन्दा दह्रा प्रधानमन्त्रीमा दरिएका छन् । अर्को सन्दर्भमा बुझ्ने हो भने समय अनुसार पनि हुन्छ बलियो र दह्रोको मापदण्ड । यो तुजुक देखाउने बेला होइन त्यो तुजुकले चल्ने समय थियो ।
तर तुजुकले चल्दैन भनेर वर्षौँसम्म एउटै विषयको बैठक बसिरहनु, लामो छलफल गर्नु पर्ने विषयहरु जस्तै संघीयतामा जाने लगायतका विषयमा चाहिँ रातारात सभासदलाई नै थाहा नभई तत्काल निर्णयमा पुग्नु र तत्कालै गरिहाल्न सकिने विषय चाहिँ कहिल्यै छिनोफानो नगर्ने नियत देख्दा मुस्लीले धान ओखलमा कुटेझैँ तिनका मथिंगलमा ढुटो हुञ्जेल हानेर विचार गर्नु पर्ने जस्तो लाग्छ होला भुक्तभोगी नागरिकहरुलाई ।
सबैभन्दा कमजोर प्रधानमन्त्री चाहिँ भारतमा को भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह भन्नेको संख्या पनि धेरै छ ।
मनमोहनलाई कमजोर भन्नुमा उनको सन् १५ जुलाई, २०११ मा उनले दिएको भाषणलाई धेरैले आधार बनाएका छन् ।
जहाँ उनले भनेका थिए ‘धेरै इण्डियनहरु सरकारसँग किन सुरक्षा नदिएको भनेर रिसाएका छन् ।
भारतीय अधिकारीहरु भन्छन् उनीहरुले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएका छन् र आतंक र अपराध कहिल्यै उन्मुलन गर्न सकिँदैन हुन पनि त्यो दुवै कुरा सही हो । हामीले प्रयास चाहिँ कायम राख्नुपर्छ’
न्यूयोर्क टाइम्सले पनि यो भनाइलाई जस्ताको तस्तै आफ्नो सम्पादकीयको लीडमै राखेर विशेष महत्व दिएर उनको सरकारको कमजोरीको टिप्पणी समेत गरेको थियो ।
यता भारतीय जनता पार्टीका नेता लालकृष्ण आडवाणीले पनि आफैँले यति धेरै निरासावादी शब्द प्रयोग गर्ने नेता कहिल्यै सफल हुँदैन भन्दै मनमोहन सिंहलाई सबैभन्दा कमजोर प्रधानमन्त्री भनेका थिए ।
अहिलेको समयमा सम्मानित सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता नेताजस्तो बोलिरहँदैन होला तर एकदमै सुक्षम ढंगले नेताका गतिविधि, विचारको व्यवहारिक अनुवादलाई नियालिरहेको हुन्छ र निर्णय निकालिरहेको हुन्छ ।
को कहाँ कमजोर र बलियो छ । यो मुद्दामा पनि त्यस्तै देखिएको छ जब सामान्यभन्दा सामान्य ठानिएका जनताले प्रधानमन्त्रीको भाषणमा प्रतिक्रिया दिए ।
ती विचारहरु त विविसी र सिएनएनमा पो सुनिए कि हाम्रा बर्तमान प्रधानमन्त्री हालसम्मकै सबैभन्दा कमजोर प्रधानमन्त्री हुन् ।
प्रायसः अमेरिकी रेडियो टिभी विविसि, सिएनएन, फक्स न्यूज, स्काइ न्यु र एनपीआरमा प्रशस्तै देखिने सुनिने वाशिंगटनस्थित विदेश मामिला विश्लेषक तथा राजनीतिक टिप्पणीकार नील गार्डिनरले अमेरिकीकामा हालसम्म युद्धकालका लागि सबैभन्दा कमजोर राष्ट्रपति बाराक हुसेन ओबामा हुन् भनेका थिए ।
गुगल सर्चले संसारको टप टेन अपराधी सरकार प्रमुखमा इण्डियाका बर्तमान प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई देखाएको छ ।
गुगलले सो बारेमा माफी नै मागेको विविसीले समाचार पनि प्रकाशन, प्रशारण समेत गर▒े । पछिल्लो समय धेरै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हार्ड एण्ड फास्ट निर्णय लिने कारणले हो भन्ने प्यारामिटरका आधारमा थियो ।
तर, त्यही कारणले उनले बिमुद्रीकरण (डिमोनिटाइजेसन) जस्तो कुराको ठूलो निर्णय लिए ।
त्यो निर्णय लिँदा कतिपय आफ्नै मन्त्री र पार्टीका नेता अनि व्यरोक्र्याटस् पनि कतिपय महत्वपूर्ण पदका जिम्मेवारहरुलाई थाहा थिएन भन्ने समाचार बाहिर आयो ।
तर एक्लै एक्लै सोझै निर्णय लिँदा पनि शक्तिशाली होइन अपराध पनि भित्रभित्रै ठूल्ठुलै ह’ने रहेछन् भन्ने पनि गुगल सर्चले देखाइदियो ।
अझ अमेरिकामा राष्ट्रपति नै कमाण्डर इन चिफ हुने सन्दर्भमा भने सबैभन्दा कमजोर कमाण्डर इन चिफ नै ओबामा हुन् समेत भनिदिए गार्डिनरले ।
रोयटर्सदेखि धेरै न्यूज एजेन्सीले विश्वासनियताका साथ क्यारी गरेको उनको गत २५ मार्च, २०११ मा दिएको टिप्पणीमा उनले ससाना अभिव्यक्तिमा दिएका दृष्टिकोणले नै उनलाई कमजोर बनाएको लिविया मिशनमा समेत असफल भएको उल्लेख गरेका छन् ।
जसलाई अरु टिप्पणी दिने नागरिकहरुले पनि आँखा चिम्लेर विश्वास गरेका थिए ।
यसले के देखायो भने हिजो आज नेताहरु के बोल्ने मिडियासँग भनेर विहान बेलुका एक पटक मिडिया वाच गर्छन् त्यो पनि थाकेर केही नबुझ्ने भएको बेला वा जाँड खाएर कुराको सुद्दी नघुस्ने बेला अनि मिडयामा गएर बोल्छन् ।
अनि पत्रकार साँझ विहान यसो नेतासँग बोलेर लेख्छन् वा भट्याउँछन् । अथवा सोझो मिडियालाई सुँघेर नेता बोल्छन् नेतालाई सुँघेर मिडिया बोल्छन् ।
हो, यसैवीचमा एउटा यस्तो अंग्रेजीमा ओएल अर्थात् ओपिनियन लिडर भनिनेहरु पनि हामी भित्रको सँस्कारले जन्माउँदै ल्याएको छ जसले नेताको कमजोरी बलियो पक्ष जनताको वीचमा राख्न थालेको छ ।
त्यो पक्षको टिप्पणी, सुझाव र विरोध समेत जुन नेतृत्वले बुभ्न सक्छ त्यो नेतृत्व नै बलियो हुने बौद्धिक युगमा उदाहरणहरु देखिन थालेका छन् ।
हेनरी किसिंगर आफैँ शक्तिशाली कूटनीतिज्ञ भए पनि उनलाई हामीले जति प्रयत्न गरे पनि अरु मुलुकले हाम्रो कुरा मानिरहेका छैनन्, रणनीति के छ तपाइँँसँग भन्ने प्रश्नमा म पहिला उनीहरुसँग छलफल गर्छु अनि उनीहरुसँगै बुझेर रणनीति बनाउछु भन्ने जवाफ दिँदा ओएलहरुबाट उठेको टिप्पणीले उनको मत नै १३ प्रतिशतले खल्र्यापखुर्लुप घटाइदिएको तथ्यलाई भुल्नुहुन्न ।
टिप्पणीकारहरुले रणनीति कसरी बनाउछु भन्दै हिँड्ने र आफ्नो सु्रक्षाका लागि अरुहरुसँग सल्लाह गर्छु भन्ने व्यक्ति खतरनाक हुन्छन् भनेपछि जनताले अरु नेताले जे भने पनि पत्याउन गाह्रो भयो ।
नेपालमा त्यस्ता नेताहरु जन्मनै नै गाह्रो होला तर त्यो उनीहरुकै आवश्यकताले पनि जन्माउने छ ।
त्यो यस कारण पनि जन्मने छ कि मान्छेहरु अब बढी नै व्यस्त वा राजनीतिक नेताहरुबाट वितृष्ण बनिरहेका छन् जसले उनीहरुलाई ओएलअरुबाट आफ्नो निर्णय गर्ने विकसित मुलुकमा झैँ सँस्कृति शुरु हुन्छ ।
त्यसैले उनीहरुले सकेसम्म लामो भाषण होइन सीधा सीधा आफ्नो योजना र विचार अनि फेरि तिनमाथि ओएलहरुका टिप्पणीहरु हेरेर निर्णय गर्न थाल्नेछन् ।
त्यसका संकेतहरु पनि हिजो आजकै दिनहरुमा देखिन थालेका छन् । त्यसको उदाहरण जनआन्दोलनताका केही नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा सरकारको नेतृत्व गर्न दिएर पुरानो नेतृत्वले आराम लिनु पर्ने विचार आएको थियो ।
जनताको स्वतन्त्र विचारप्रतिको आस्था राजनीतिक अकर्मण्यताका कारण नै बढेर गएको छ । त्यसतर्फ ध्यान दिने नेता अहिलेको दह्रो नेता हुन सक्छ ।
त्यसैले होला कहिले कवि लेखकलाई बोलाएर तपाइँको यो विषयमा धारणा के छ भनेर भारतदेखि अमेरिकासम्मका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरुले बेला बेला लाजगाल भए पनि सोधिरहन्छन् ।
कहिले खेलाडीहरुलाई बोलाएर तपार्इँको फलानो इभेण्टको यो व्याटिंग, यो बलिंग मन प¥यो भनिरहन्छन् । त्यो पनि आफ्नो जनवर्गीय संगठनका धुपौरेको मात्र भेटघाट होइन ।
यसले स्वतन्त्र विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने र उनीहरुका टिप्पणीमार्फत विचार बनाउने नागरिक, काममा व्यस्त पेशाकर्मीहरु जो नेताका भाषण सुन्न भ्याउँदैनन् वा मन पराउँदैनन् उनीहरुका लागि बल पुग्छ र त्यही बल नै अबको शताब्दीका नेताहरुको बल हो ।
हो त्यही बललाई प्रयोग नगर्ने नेता अब बलियो हुन सक्तैन । नेता बलियो हुन व्यवस्था बलियो हुनुपर्छ पहिला ।
व्यवस्था जति खराब भए पनि । यही व्यवस्था नै मान्ने हो भने पनि राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल नभएसम्म हामी जनता पनि व्यवस्था पनि र सरकार पनि कमजोर नै भइरहन्छ समग्रमा ।
News Source : Janaboli
प्रकाशित भएको : April 24th, 2020
नेकपा ओली समुहकी जिल्ला नेता ब्राउन सुगरसहित…
अस्पतालको लापरबाहीले सुत्केरीको मृत्यु अस्पताल तनावग्रस्त
फेवातालको पानि मात्र होइन क्षेत्रफल पनी सुक्यो…
प्रधानमन्त्रीले अरुण दिउ भारत संग सम्बन्ध सुधारौ…